ओलीको नपच्ने बोली: स्कुटी चढ्ने की, प्रमज्यू ! | रुपान्तरण
ओलीको नपच्ने बोली: स्कुटी चढ्ने की, प्रमज्यू !
२० असार २०७६, शुक्रबार १६:०६
प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई बेला बेला मुख र पेटको समस्याले पिरोल्छ । दुईदिन यता उनलाई खाना रुचेको छैन । पेट डम्म फुल्छ । पखाला लाग्ला झैं हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार, बोलीमा समस्या बढेपछि त्यसको जटिलता पेटमा पनि देखिएको हो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा सन्चो नभएको जनाउँदै बीचैमा उठने गरेका छन । पार्टीको सैद्धान्तिक दस्तावेज र पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका विषयमा बुधवार र विहिवारको दुई अध्यक्ष बीचको बैठक विसन्चोकै कारण थाति रहयो ।
संघीय राजधानी काठमाडौं २४ सै घण्टा श्वासप्रश्वासका लागि योग्य छैन । हरेक श्वासमा प्रदुषण छ ।
व्यवहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनले पनि काठमाडौं उपत्यकामा १०० जनामा ३० जनाले मास्क प्रयोग गरेको पाइएको छ । मास्क प्रयोग गर्न चिकित्सकहरु सुझाव दिन्छन । मेडिकल व्यवसायि लगायत मास्क विक्रेताहरु पनि विक्रि बढिरहेको बताउँछन ।
तर कालो सिसावाल गाडीमा हुईंकिने प्रधानमन्त्री ओलीले मास्कमाण्डौंको दृश्य किन देखेनन ? गत शनिवार मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तिका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौंको सडक स्तरोन्नति भएकोले मास्क लगाएर हिंडने मान्छे नदेखिएको दावी गरे ।‘ मैले प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको थिएँ, —‘अब काठमाडौंमा नाक समाएर हिंड्नु पर्दैन । म प्रधानमन्त्री हुँदा आधा जनसंख्या मास्क लगाएर हिंड्थे । अहिले मास्क लगाएर सडकमा कोहि पनि हिंड्दैनन ।’ कार्यकर्ताले तत्कालै परर्र तालि बजाए । उनको बोली भाइरल हुने वित्तिकै सर्वसाधारण छक्क परे । उनी ढंटुवा प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएको लगाए । वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले लाजले शिर निहुराए । वातावरण विभागले रत्नपार्क , पुल्चोक, भैंसेपाटी लगायत शहरका विभिन्न स्थानमा वायुको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र जडान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्ड भन्दा कयौं गुणा वायु प्रदुषण देखिएको छ । मास्क विना हिंडडुल गर्न नसकिने अवस्था छ ।
धुलेमाण्डौं पछिको मास्कमाण्डौं
संघिय राजधानीमा पहिलो पटक घुम्न आएका व्यक्तिहरु काठमाडौंबासीको मुहार हेर्न पाउँदैनन । ‘काठमाडौंका मान्छे चोर जस्तो मुख लुकाएर हिंड्ने रै छन ।’ अभिभावकसँग घुम्न आएका बालबालिकाको यस्तो टिप्पणी हुने गर्छ ।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको विहिवार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस सांसद रंगमती शाहीले स्कुटी चढ्न आग्रह गरिन । “मन्त्री ( भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ) ज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु , आउनुस प्रधानमन्त्री ज्यू । मेरो स्कुटी पछाडि बस्नुस । वनस्थलीसम्म जाऔं । मास्क लगाउनु पर्छ की पर्दैन , हेरौं ।’ शाहीले आग्रह गरिन ।
६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ललितपुरको साझा यातायातको कार्यलयमा विद्युतीय बस सेवाको उद्घाटन गरेका थिए । ती १७ वटा बसमा कैफियत देखिएपछि आपूर्ति कम्पनिलाई फर्काउन निर्देशन दिइएको छ । सांसद शाहीले प्रश्न गरिन, “ती विद्युतीय बस कहाँ छन ?’ जवाफमा मन्त्री महासेठले आफ्नो मन्त्रालय जानकार नभएको भन्दै पन्छिए ।
विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि मुख लुकाउनु पर्ने अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीमा सिर्जना भएको छ । काठमाडौंले रुप फेरेपछि नामाकरण पनि बदलिएको छ । काठमाडौं अहिले हिलेमाण्डौं, धुलोमाण्डौं हुँदै मास्कमाण्डौंका रुपमा चिनिएको छ । अढाई सय वर्ष लामो इतिहासमा बोलीमा समस्या भएका प्रधानमन्त्रीका रुपमा चित्रण भएका छन, ओली ।
मनोचिकित्सक तथा पेटरोग विशेषज्ञको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने , मस्तिष्क (मन ) र पेटबीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।
मस्तिष्कले गलत कार्य गरेको ठहर गरेपछि पछुतो महसुस हुन्छ । खानपिनमा रुचि हुँदैन । कसैसँग कुरा गर्न मन खुल्दैन । पेट डम्म फुले जस्तो हुन्छ । शौच पनि सफा हुँदैन । पखाला लाग्ला झैं हुन्छ । तर, लागिहाल्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि यहिं समस्या भएको चिकित्सकहरुको ठहर छ । नपच्ने बोलीका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई पखाला लाग्ला झैं भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका एक सल्लाहकार भन्छन,‘मान्छेको जीउ हो । तलमाथी भइहाल्छ नि । प्रधानमन्त्रीज्युको बोली पनि त्यस्तै हो । तलमाथी भइहाल्छ नि । ’